အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ tubular Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်? အကောင်းဆုံး tubular Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
tubular Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan tubular Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ဒီအဘယ်သူမျှမမော်တာနှင့်အတူ code ကစံအရွယ်အစား scquence tubular keys ကိုဖြတ်နိုင်သည်ကိုခရီးဆောင် tubular key ကိုစက်များအတွက်အဓိကအပိုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.keymachine.com.tw/my/tubular-key-cutting-machine.html
Key ကို Code ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အကောင်းဆုံး tubular Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် tubular Key ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Right-သို့မဟုတ်လက်ဝဲ-အလှည့် keys ကိုဖြစ်စေဘို့အကွံ၏ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်နှင့်အတူဒီနည်းကိုထုံးစံလုပ်, စွယ်စုံ code ကိုစက်ဖြတ်တောက်မှု keys ကို။ စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သော, ကတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ကုဒ်လေး keys တွေကိုတခုနဲ့ထပ်နေတယ်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 56cm (W) * 83cm (ဃ) * 113cm (H)ဘ 170 ကီလိုGW 220 ကီလိုMeas ။ 19 CFT မော်တော်: 3Phase, 1 HP, RPM 1725380V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz
automatic Key ကိုစက်များ
အထူးဒီဇိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ထားသော key ကိုချမှတ်ခြင်းစက်သာ vise ပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့် Semi-မြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ်စတုရန်း key ကိုလုပ်လိမ့်မည်။ သတ်မှတ်ချက်များ၏ဖောက်သည်ရဲ့သီးသန့်လိုအပ်ချက်အပျေါမှာထုတ်လုပ်မှု။ သူတို့၏လိုအပ်ချက်ကိုအပျေါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သံသရာအရေအတွက်ထူထောင်ရန်ကွန်ပျူတာ & မစ်အသုံးပြုသူ automatic code ကိုရှေးခယျြ။ အဖြိုက်နက်ခုတ်သဖြင့်တပ်ဆင်ထား။ အချိန်နှင့်ထိရောက်မှုကိုကယ်တင်, လုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူ! အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:ရှုထောင်: 126cm (W) * 68cm (ဃ) * 117cm (H)ဘ 300 ကီလိုGW 350 ကီလို မော်တော်:3အဆင့်, 1 HP, RPM 1725380V သို့မဟုတ် 220v, 50 Hz